ဆန်းသစ်ပေါ်လွင်တဲ့ အလှတရားလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ နီနီခင်ဇော် - Cele Platform
Melody World ပြိုင်ပွဲမှတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ကတော့ မြန်မာဆန်တဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးတစ်ဦးပါ။ နီနီကတော့ လက်ရှိမှာ ပရိသတ်တွေ အားလုံ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြရတဲ့ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာလည်း ဒိုင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ နီနီခင်ဇော်က ခမ်းနားလှတဲ့ The Voice Myanmar ရဲ့စင်မြင့်ထက်မှာ ဘုရင်မတစ်ပါးလို တောက်ပနေတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက် The Voice Myanmar ရဲ့ခမ်းနားလှတဲ့ ဆင်မြင့်ထက်မှာ ဘုရင်မတစ်ပါးလို တောက်ပနေတဲ့ နီနီခင်ဇော်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
နီနီခင်ဇော်ကတော့ “Life isacompetition that is endless Stay happy and be positive ဘဝသည် မပြီးဆုံးသောတိုက်ပွဲပါ ပျော်ပျော်ကြီးးတိုက် ကောင်းတာလေးတွေးရင်းပေါ့…. ချစ်တဲ့ နီနီ ” ဆိုပြီး သူမရဲ့အလှပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။
နီနီခင်ဇော်ကတော့ လတ်တလောမှာ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း စီးပွားရေးတွေလည်း လုပ်ဖြစ်နေတာပါ။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေလည်း အရမ်းကိုလှနေတဲ့ နီနီခင်​​ဇော်​ရဲ့ပုံရိပ်ကိုသ​ဘောကျရင်​ SHARE သွားကြဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။Momolay
Melody World ပွိုငျပှဲမှတဈဆငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ အဆိုတျော နီနီခငျဇျောကတော့ မွနျမာဆနျတဲ့ အလှတရားကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးတဈဦးပါ။ နီနီကတော့ လကျရှိမှာ ပရိသတျတှေ အားလုံ စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့နကွေရတဲ့ The Voice Myanmar သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးမှာလညျး ဒိုငျတဈဦးအဖွဈ ပါဝငျဆောငျရှကျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ မနကေ့တော့ နီနီခငျဇျောက ခမျးနားလှတဲ့ The Voice Myanmar ရဲ့စငျမွငျ့ထကျမှာ ဘုရငျမတဈပါးလို တောကျပနတေဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ပရိသတျတှအေတှကျ The Voice Myanmar ရဲ့ခမျးနားလှတဲ့ ဆငျမွငျ့ထကျမှာ ဘုရငျမတဈပါးလို တောကျပနတေဲ့ နီနီခငျဇျောရဲ့ပုံရိပျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
နီနီခငျဇျောကတော့ “Life isacompetition that is endless Stay happy and be positive ဘဝသညျ မပွီးဆုံးသောတိုကျပှဲပါ ပြျောပြျောကွီးးတိုကျ ကောငျးတာလေးတှေးရငျးပေါ့…. ခဈြတဲ့ နီနီ ” ဆိုပွီး သူမရဲ့အလှပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာပါ။
နီနီခငျဇျောကတော့ လတျတလောမှာ အနုပညာအလုပျတှလေုပျရငျး စီးပှားရေးတှလေညျး လုပျဖွဈနတောပါ။ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှလေညျး အရမျးကိုလှနတေဲ့ နီနီခငျဇျောရဲ့ပုံရိပျကိုသဘောကရြငျ SHARE သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။